Dovremmo - Italien - Birman Traduction et exemples
Vous avez cherché: dovremmo (Italien - Birman)
ma ora, perché dovremmo morire? questo grande fuoco infatti ci consumerà; se continuiamoaudire ancora la voce del signore nostro dio moriremo
အကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်ကြောင့် ယခုသေရပါ မည်နည်း။ ဤကြီးစွာသောမီးဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့သည် ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မည်။ အကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားမိန့်တော်မူသော အသံတော်ကိုတဖန်ကြားရလျှင် သေရပါလိမ့်မည်။
perché non dovremmo fare il male affinché venga il bene, come alcuni - la cui condanna è ben giusta - ci calunniano, dicendo che noi lo affermiamo
ကောင်းသောအကျိုးရှိစေခြင်းငှါ မကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်ကြကုန်အံ့ဟု လူအချို့တို့သည် ငါတို့ကို ကဲ့ရဲ့လျက်၊ ငါတို့စကား ကိုပြန်ပြောသည်အတိုင်း ဆိုဦးမည်လော။ ထိုသို့ဆိုသောသူတို့သည် ကိုယ်အပြစ် ဒဏ်ကို ခံထိုက်ကြ၏။
gaal, figlio di ebed, disse: «chi è abimèlecheche è sichem, perché dobbiamo servirlo? non dovrebbero piuttosto il figlio di ierub-baalezebul, suo luogotenente, servire gli uomini di camor, capostipite di sichem? perché dovremmo servirlo noi
ဧဗက်၏သား ဂါလကလည်း၊ ငါတို့သည် အဘိမလက်အမှုကို စောင့်ရမည်အကြောင်း၊ အဘိမလက် ကား အဘယ်သူနည်း၊ ရှေခင်ကား အဘယ်သူနည်း။ အဘိမလက်သည် ယေရုဗ္ဗာလသား မဟုတ်လော။ ဇေဗုလသည် သူ၏အမှုထမ်းမဟုတ်လော။ ရှေခင်အဘဟာမော်လူတို့၏ အမှုကို ထမ်းကြလော့။ အဘိမလက်အမှုကို အဘယ်ကြောင့် ထမ်းရမည်နည်း။
quando fu esaurito il denaro del paese di egittoedel paese di canaan, tutti gli egiziani vennero da giuseppeadire: «dacci il pane! perché dovremmo morire sotto i tuoi occhi? infatti non c'è più denaro»
အဲဂုတ္တုပြည်၊ ခါနာန်ပြည်၌ ငွေကုန်သောအခါ၊ အဲဂုတ္တုလူအပေါင်းတို့သည် ယောသပ်ထံသို့လာ၍ စား စရာဘို့ ပေးသနားတော်မူပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် ငွေကုန်သော်လည်း ရှေ့တော်၌ အဘယ်ကြောင့် သေရပါအံ့နည်းဟု လျှောက်ကြသော်၊
perché dovremmo perire sotto i tuoi occhi, noiela nostra terra? acquista noiela nostra terra in cambio di paneediventeremo servi del faraone noi con la nostra terra; ma dacci di che seminare, così che possiamo vivereenon morireeil suolo non diventi un deserto!»
sonotori desu (Japonais>Portugais)kasingkahulugan ng inaayos konti (Tagalog>Anglais)only i can hear you (Anglais>Espagnol)thath is way (Anglais>Hindi)cuidate mi querido (Espagnol>Anglais)sabayon (Anglais>Espagnol)moderate intensity aerobic physical activity (Anglais>Grec)dahil malayo ka sa akin (Tagalog>Anglais)सेक्सी पिचxxcर video open bp (Anglais>Hindi)essay on aaj ka vidyarthi in 300 words in hindi (Anglais>Hindi)ano ang angkla (Anglais>Tagalog)than (Anglais>Finnois)merayakannya (Indonésien>Espagnol)ayat, memapan (Anglais>Malais)i shall go mamas wedding (Hindi>Anglais)plastindustri (Danois>Anglais)ut amem et foveam (Latin>Italien)بوغوسلافسكا (Arabe>Anglais)resteranno (Italien>Swahili)napulot ang pera (Tagalog>Anglais)मारवाड़ी सेक्सीzxxz (Afrikaans>Anglais)eksperimentelt (Danois>Grec)matatau (Maori>Italien)amaranth flour (Anglais>Télougou)two million (Espagnol>Anglais)